Maktabada Wareegta iyo Bugaagta Geeddiga
You are here: Home Home Maktabada Wareegta iyo Bugaagta Geeddiga
Sheekh, 4/7/12ka: Maktabada Wareegta iyo Bugaagta Geeddiga ah ayaa safarkoodii xidhiidhka ahaa ee maalmihii u dambeeyay ay kusoo mareen magaalooyinka Boorama iyo Gabiley waxay manta kugaadhay Degmada Sheekh oo katirsan Gobolka Saaxil, waxaana ku qaabbilay deegaankaas Naadiga Akhriskaee Degmada Sheekh.
Safarkan Geeddiga Bugaagta oo uu ku wehelinayo Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, af=hayeenka rasmiga ah ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland,Boobe Yuusuf Ducaale ayaa waxa munaasibad loogu qabtay hoolka xarunta degmada Sheekh, iyada oo maamulka degmadu uu kala qayb-galay munaasibadaas, waxaana lagu soo bandhigay Maktabadda Wareegta iyo bugaag qiimo leh oo ay halkaas kula kulmeen ardayda wax kabarata dugsiyada muggaweynee SOS iyo dugsiga Xanaannada Xoolaha ee degmadaas.
Ugu horreyn waxa munaasibadaas ka hadlay qoraaga caanka ah ee Jaamac Muuse Jaamac oo hormood u ah bahda Maktabadda Wareegta, waxaanu iftiimiyay in degmada Sheekh ay tahay hoygii aqoonta,, isagoo ku hambalyeeyay maamulka degmada hirgelinta xarun wax-akhris oo ay ka sameeyeen isla xarunta degmadaas, waxaanu sheegay in Bugaagtan Geeddiga ahi ay u baahan yihiin meel ay degaan oo ay ku nagaadaan.
Guddoomiyaha Degmada Sheekh ayaa isaguna ka warramay muhimadda ay kobcinta aqoonta u leedahay wax akhriska iyo qoristu, waxaanu maamulahan sheegay inay ku hawlan yihiin sidii ay u dhiirri-gelin lahaayeen dhallinyarada, islamarkaana ay halgan uga gali lahaayeen cidhibtirka balwada qaadka.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo wacyi-gelinta isla markaana ah af-hayeenka rasmiga ah ee xukuumadda Somaliland,BoobeYuusuf Ducaale oo isagu marti gaar ah ku ahaa munaasibadaas ayaa tilmaamay in joogi taankiisu uu ka turjumayo doorka Xukuumaddu ay kuleedahay dhiirri-gelinta aqoonta da’yarta,
isla markaana waxa uu kula dardaarmay dhallinyaradii madasha bandhigga Geeddiga Bugaagta kaqayb-gashay inay ku dedaalaan wax akhriska, isagaoo xusay in arrintaasi ay ka taageeri doonto inay waayo-aragnimo kufilan kaheli doonaan iyaga oo aan melena uga digo-rogan deegaankooda.
Sidoo kale, waxa iyaguna madashaas ka hadlay maamulka Naadiga Akhriska ee Degmada Sheekh, iyagoo ku ammaanay maamulka degmadooda fullinta ballantii sannadkii hore ee la xidhiidhay hirtgelinta xarun wax akhris, isla markaana waxay farriin u direen bahda Maktabada Wareegta oo ay ka codsadeen in doorkii ay ka sugayaan.
Dhinaca kale, waxay xubnaha hoggaaminaya Maktabaddan Wareegta ay booqdeen Dugsiga Sareee SOS, kaas oo ka mid ah Dugsiyada tirada yar ee dalka ku yaalla ee ay ardaydu kunegiyihiin, waxaana kusoo dhaweeyay maamulka, macalimiinta iyo ardayda dugsigaas, waxaanay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwanee uu kakoobanyahay dugsigaasi.
Ugu dambayntii weftigan Bugaagta Geeddiga iahi waxay u baqooleen dhinaca magaalada Burco oo la filayo in maalinta berri ay kusoo bandhigaan Maktabadda Wareegta...